China Cultural Stone-VNS-1308DCB fanamboarana sy orinasa | LONGSHAN
Anaran-javatra: Quartz mainty Wall Cladding Panel manify
Habe:100X360MM / 100X350MM / 100X400MM
Fe-potoana fandoavana: T / T na L / C
1. Mora ny mametraka azy, ary miaraka amin'ny vidiny mora. Ity loko mainty mamirapiratra amin'ny kolontsaina vato ity dia mifanentana amin'ny loko hafa. Ataovy feno miaraka amin'ity vato voajanahary mahavariana ity ny volanao.
2. Ny lanjany maivana kokoa noho ny vokatra hafa. mora kokoa ny mitondra sy ny fanamboarana.
3. Ireo sakany marobe amin'ireo vokatra misy fomba sy habe samihafa. Azontsika atao ny manaiky ny vokatra namboarina manokana ho an'ny mpanjifa, raha mbola manome ny endrika amina sary na sary ny mpanjifa dia afaka manome ny mpanjifa ny vokatra izahay.
4. Ny velarantany tokana dia manolotra endrika maro isan-karazany, loko sy endrika hafa tsy mitarika lamina tsy mifanaraka. Raha ny marina, izany dia hampitombo ny hatsaran'ny biriky takelaka ihany, satria mitondra fahatsapana hafa ho an'ny olona izy ireo.
Ny vokatra dia azo ampiasaina betsaka amin'ny trano fonenana sy tetik'asa ara-barotra amin'ny haingon-trano sy ivelany, ary koa ny kianja lehibe, ny fametrahana ny làlana ary ny asa fanaovan-tany. Ny firafitry ny vato ara-kolontsaina dia voajanahary sy mahafinaritra. maneho fahatsapana miverina amin'ny natiora
d. Manana ekipa fanaraha-maso kalitao matihanina izahay, ny QC anay dia hijerena mafy avy amin'ny akora hatramin'ny vokatra efa vita.
3. Inona ny seranan-tsambo?
4. Inona ny ora fanaterana?
Teo aloha: Vato ara-kolontsaina-VNS-1308HGCB
Manaraka: Loose / Random Stone-VNS-1120LS